Knowledge Archives - True News
အင်းဝခေတ်က သူခိုးကြီး ငတက်ပြား အကြောင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၇၂၆-ခုတွင် အင်းဝမြို့ကို စတင်တည်ထောင်သူ သတိုးမင်းဖျားလက်ထက်တွင် စစ်ကိုင်း ရေဝန်းရပ်၌ ကျော်စောသော သူ ခိုးကြီးငတက်ပြားဟူ၍ ရှိ၏။ ၎င်းသူခိုးကြီးသည်
“ရာမ” ဟာ “မယ်သီတာ” ကို တကယ် ချစ်ခဲ့တာလား???
“ရာမ” ဟာ “မယ်သီတာ” ကို တကယ် ချစ်ခဲ့တာလား??? ကျွန်တော် အခုလို
အင်းလေး ကန်ထဲမှာ မြှုပ်နေသော နှစ်ရာချီသက် တမ်းရှိတဲ့ ရှေးဟောင်း စေတီတွေရှိရာ စံကားမြို့ဟောင်း အကြောင်း
အင်းလေး ကန်ထဲမှာ မြှုပ်နေသော နှစ်ရာချီသက် တမ်းရှိတဲ့ ရှေးဟောင်း စေတီတွေရှိရာ စံကားမြို့ဟောင်း အကြောင်း အင်းလေးကန်ထဲမှာ
လူ့ချဥ်ဖတ်တွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အပြုအမူများ
လူ့ချဥ်ဖတ်တွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အပြုအမူများ နေ့စဥ်ပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားရတဲ့အခါ လူတွေကြားထဲ သွားလာလှုပ်ရှားရင်းနဲ့ လူပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံရလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့လို ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ မိမိဘက်မှ
ကမ္ဘာ့ သမိုင်းဝင် ဝက်ထီးကန်တိုက်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ သမိုင်းဝင် ဝက်ထီးကန်တိုက်ပွဲ မဟာဗန္ဓုလကျဆုံးပြီးနောက် ရန်ကုန် ဓနုဖြူစစ်ပွဲများတွင်ရှုံးနိမ့် ခဲ့သော်လည်း မြန်မာမင်းနှင့် လွှတ်တော်တို့သည် တစ်ဖက် သတ်တောင်း ဆိုချက်များကြောင့် အင်္ဂလိပ်တို့နှင့် စစ်ပြေငြိမ်းစာချုပ်